Fursadaha Haweenka Somaliland Helaan Waxay Kala-Badh Ka Yar Yihiin Kuwa Raggu Helaan – NAGAAD – Nagaad
HomenewsNews & EventsFursadaha Haweenka Somaliland Helaan Waxay Kala-Badh Ka Yar Yihiin Kuwa Raggu Helaan – NAGAAD
HARGEISA, 19 March – Haweenka Somaliland waxa ay helaan in ka yar kala-badh fursadaha dhaqaale, ganacsi iyo waxbarasho ee ay raggu helaan sida ay xaqiijisay daraasad cusub oo ay soo bandhigtay dalladda haweenka ee Nagaad.
Si sinnaan la’aantaas meesha looga saaro, waxa lama huraan ah in:
Ay dawladdu curiso isla markaana fuliso xeerar iyo qorshayaal wax lagaga qabanayo isu dheellitir la’aantaasi baahsan.
Dawladdu waa in ay mudnaanta koowaad ka dhigato hir-galinta qoondada haweenka, sinnaanta fursadaha shaqo iyo kor u qaadidda waxbarashada haweenka.
Ganacsatada, ururada bulshada, rag iyo haweenba waa in ay iska kaashadaan sidii meesha looga saari lahaa nooc walba oo isu dheellitir la’aaneed.
Daraasadda oo dhamaystiran kala deg lifaaqan: https://bit.ly/2Y7NSA8 Wixii faahfaahin ah kale xidhidh:
NAGAAD: nagaadcom@gmail.com (252) 634424571